Wararka - Halkan waxaa ku yaal tilmaamo tallaabo-tallaabo ah oo ku saabsan sida loo isticmaalo timo jaraha, timaha hagaajiyaha iyo burushka toosinta timaha.
SIDEE LOO ISTICMAALAA MADAXA Timaha
Haddii aad isticmaaleyso curiyaha timaha dhaqameed, waa tan waxa la sameeyo.
1. Qabso qayb ka mid ah timaha. Abuur qayb ka mid ah timaha si aad u xoqdo. Qeyb yarta, curlku wuu adkeyaa. Markay sii weynaato qaybta, ayaa dabacsan curlku.
2. Meeshaada birta ah ku xir. Fur isku-xidhka birtaada, ka dibna waxaad dhigtaa salka qaybta timahaaga, iyadoo timaha la dhigay inta u dhexeysa birta iyo birta. Ka taxaddar inaadan is gubin.
3. Xidh oo rogrog. Si tartiib ah u xiro suunka, ka dibna hoos ugu xoqo qaybta timaha illaa ay ka gaarto dhamaadka. Si buuxda u xir haysa.
4. Maroojin, maroojin, maroojin. Ku wareeji birtaada kor u xoqida xagga xididdadaada, adigoo duubaya dhererka qaybta ku hareeraysan hawsha. Sug ilaa 10 illaa 15 ilbidhiqsi timahaagu kululaadaan.
5. Fur haysa oo sii daa. Si tartiib ah u fur haysa oo ka soo qaad birta curiyaha timahaaga, adoo u oggolaanaya curlka aad hadda abuurtay inuu si xor ah u laalaado. Ma ahan wax aad u adag, sax?
Tilmaamaha tifaftiraha: Haddii aad doorbideyso muuqaal dabiici ah, timahaaga ka fogee wejigaaga. Si aad sidaas u yeelatid, timahaaga hoos u laabo oo hareerahaaga u wareego dhinaca bidix ee dhinaca bidix iyo midigta bidix.
SIDEE LOO ISTICMAALAA TAHRIIB TAHAY
Haddii aad isticmaaleysid timo dhaqe hagaajiye, waa tan waxa la sameeyo.
1. Adeegso birta fidsan ee saxda ah. Toosiyaha dhoobada ayaa u fiican ganaax noocyada timaha ee caadiga ah maadaama ay ka caawin doonaan jilicsanaanta timaha.
2. Toosiiyaha ku dhex mari timahaaga. Hadda oo aad timaha ka jartay, waxaad bilaabi kartaa inaad toosiyo 1 inji (2.5 cm). Ka bilow wajiga hore ee timahaaga kuna dhaqaaq jidkaaga dhanka timahaaga illaa aad ka gaarto dhinaca kale ee madaxaaga. Si aad timahaaga u toosiso, qaado gabal 1 inch (2.5 cm) ah, ku shanlee, ka dibna daboolka ku qabo. Kadib, birta fidsan ku dhex mari timahaaga, adiga oo ka bilaabaya xididdadaada una gudbaya dhinaca dhamaadka timahaaga. Samee tan ilaa aad ka hagaajiso timahaaga oo dhan.
Markaad hagaajineyso timahaaga, iskuday inaad mar kaliya ku hagaajiso qalabka hagaajinta xarig timo ah. Tani waa sababta ay xiisaddu fure u tahay, maxaa yeelay markaad timahaaga u jiido si dhakhso leh ayey u toosin doontaa.
Haddii timahaagu wareerayaan intaad toosinaysid, tani waxay macnaheedu noqon kartaa inaadan gebi ahaanba qalajin. Qaado qalajiyaha oo gebi ahaanba qalaji timahaaga kahor intaadan toosin.
Haddii aad awoodid, ku isticmaal kuleylka hoose birtaada fidsan. Goobaha ugu sareeya runtii waxaa loogu talagalay xirfadlayaal saloon, waxayna dhaawici karaan timahaaga haddii aadan si sax ah u ilaalin. Ujeeddadiisu tahay inaad joogtid inta udhaxeysa 300 iyo 350 darajo.
Mararka qaar way ku caawinaysaa inaad cayrsato birtaada fidsan ka dib shanlo. Shanlo qaado oo ka bilow xididdada timahaaga. Si tartiib ah shanlada u hoos mari timahaaga oo markaad saas samaynayso, shanlaha ku raac toosiyahaaga. Tani waxay kaa caawin kartaa oo kaliya inaad timahaaga u dhigto mid siman oo isku-dhafan oo xor ah markaad toosiso.
3. Ku dar iftiin leh serum. Si aad timahaaga ugu hayso meesha una sameysato dhalaal, spritz ama mari mari timahaaga oo dhan. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad yareyso jahwareerka oo aad duusho sidoo kale waxay timahaaga siinaysaa silkiness dheeraad ah. Waxaad sidoo kale ku buufin kartaa timahaaga timo qafiif ah xididada si aad uga ilaaliso inay baraf noqdaan maalinta oo dhan. 
SIDEE LOO ISTICMAALAA BURASHADA SIRTA Timaha
Haddii aad isticmaaleyso burushka toosinta timaha, waa tan waxa la sameeyo.
1. Timahaaga u qaybi afar gobol. Qeyb kasta, waa inaad ku dalbataa ilaaliyaha kuleylka. In kasta oo shanlooyinka kulul aysan waxyeello u geysanayn timaha sida toosiyaha, haddana waxaa ugu wanaagsan in la hubiyo in timaha si fiican looga ilaaliyo suurtagalnimada waxyeellada kuleylka ee u horseedi kara inay noqdaan kuwo qallalan oo jajaban. Seddex ka mid ah gobolada ka xir midka aad la shaqeyneyso, ka dibna gobolkaas kalabar u kala qaad. Si toos ah oo toosan, timaha waa in lagu dhalaa shanlo ilko ballaadhan. Isu keen labada qaybood ee gobolka koowaad mar haddii labadaba si habboon loogu dhajiyay shanlo ilko ballaadhan.
2. Shanlada kulul u orod sida ugu dhow xididdadaada sidaad awoodi kartid adigoon is gubin. Hubso inaad kaliya badh ka qabato gobolka. Ka gudub ilaa aad ka gaadhayso toosnaanta aad rabto, in kasta oo laba-saddex jeer ka fiican u shaqeeyaan si toos ah laakiin aan timo fidsan.
3. Ku soo celi dhammaan tallaabooyinka qayb kasta.
4. Wax yar samee daryeelka kadib. Natiijooyinka ugu fiican, ee muddada dheer soconaya, saliid mari, subag, ama ka tag timaha cusub ee shanlay. Saliida saytuunka, saliida dhalada, ama shea butter waa lagugula talinayaa. Timaha waxay u egtahay inay qallalaan kuleylka awgood, markaa xusuusnow inaad si fiican u qoydo qiyaastii laba jeer maalintii.